Date My Pet » No Izy Misangy ianao? Jereo Out Fa ireo famantarana!
Last nohavaozina: Sep. 17 2020 | 3 min namaky
Moa ve ianao manana bandy fa mitady ny kanefa tsy mahazo antoka ny fihetseham-pony? Nahita tena nanontany tena ve ny dikan'ny hoe rehefa manao zavatra sasany, na miasa amin'ny fomba iray manokana isika? Nanontany tena ve ireo famantarana izay tokony hihevitra fa ho fantatra raha tena izy aminareo filalaovana fitia?
Raha namaly amin'ny filaza ny rehetra ireo fanontaniana ireo, dia angamba mila toro-hevitra vitsivitsy mba hanampy anao amin'ny alalan'ny sambo, izahao izay raha tena ho anao.
No foana masony?
Raha misy bandy ianao miresaka foana ny masony ho nandritra ny fotoana maharitra, dia mety ho famantarana fa izy no mahafinaritra ho anao koa. Na izany aza, saro-kenatra koa ry zalahy maso mihazona fifandraisana, albeit ny vanim-potoana fohy ny fotoana.
Dia hoe ny mena?
Aza handroaka ny lehilahy saro-kenatra ho azo hatonina. Raha blushes na oviana na oviana ianao manodidina, dia misy ny ry zareo no hanomboka eny ny resaka, ary hanampy ny bandy avy araka izay mety ho faty mba hiresaka aminao. Fa ry zalahy na dia izay tsy saro-kenatra, blushing Hita tokoa fa famantarana tsara noho izany Soso-kevitra an-kolaka ny miahy anao.
Ny selam-pitatitra no naka ny?
Ve hoe nahoana fa toa mihetsiketsika foana foana zalahy rehefa manodidina anao? Tsara, dia mety tsy ho foana satria te handao. Ireo fotsiny ny selam-pitatitra no naka ny rehefa miezaka ny fintinina ny herim-po mba hiresaka aminao.
Ve ny volomaso ary manomboka natsangana?
Na dia ny lehilahy fa liana amin'ny mety miezaka ny hanafina ny masony, rehefa miresaka aminao, raha Izy no manangana ny volomaso ary manomboka amin'ny widened maso, dia izay no famantarana fa izy no filalaovana fitia aminareo.
Ve izy ho copycat?
Izany no tena mahaliana. Raha izy no filalaovana fitia aminareo, dia olana misy ankehitriny maka tahaka izay manao. Voamarikao ve fa isaky ny hifindra ny tananao noho ny volo, Manosika ny tànany koa ny volo? Na ianao na dia manilika ny tongony, izy no koa? Izany dia ny ody ny filalaovana fitia, ary izao no famantarana sasany ny tokony hihevitra ny.
No Jery mitongilana ny lohany?
Efa voamarikao ve fa ny lohany tilting zalahy ho anareo rehefa miresaka aminy? Izany dia midika hoe tena tia anao, ary dia ho hihaino, ka ny tsy hanapaka avy amin'ny zavatra ianao hoe:.
Misy tsiky nilalao amin'ny molony?
Ny lehilahy izay liana ao anatinareo no mitsiky aminao ho famantarana fa te hiresaka aminao. Ary noho izany, raisiny ho toy ny manasa ny manombo-dresaka.
No mitsangana akimbo?
Ny bandy izay tia manandrana ianao, mba hampisehoana anareo izy-tena antoka amin'ny fitsanganantsika amin'ny tanana napetraka teo amin'ny andilany, na ankihiben-tànany napetraka tao amin'ny tadivavarana ny fehin. Famantarana izany fa tsy ho hita miharihary, saingy afaka manao toy ny mpitari-dalana.
Dia nitombo ny mpianatra?
Fantatrao ve fa raha tianao ny olona iray, ny mpianatra hanitatra sy raha tsy, izy ireo fifanekena? Miaraka amin'izany ao an-tsaina, rehetra tokony atao dia mijery ny masony ianao rehefa manana ny resaka. Raha hitarin'i, dia fantatrao izy liana.
Ve izy ihany aza no voatendriko ianao?
Moa ve ny bandy nanome anao malefaka mikasika, araka ny mandalo? Dia izy no tena miahy anao sy te hisambotra ny saina. Na izany aza, Mitandrema ireo na mikisaka izay, tsara, fotsiny na mikisaka izay te-hilalao eo amin'ny fifandraisana. Hainao ny tiako hambara, sa tsia?
Satria ianareo izao hahatakatra ny famantarana mba hihevitra avy hatrany fa ny fantatro raha aminareo dia filalaovana fitia, tonga ny fotoana mba handray ny omby amin'ny tandrony. Aza avela handalo anareo ny fahafahana amin'ny!
5 Zavatra Celebrities Afaka ianarantsika momba Fifandraisana
Ahoana no Hatramin'izao ny Zazavavy Kely Iray Iza Mampiseho Little Fitiavana
Ny korontandrotana lisitra Farm Dog Fa te ho tompony